Idaacad ku taal Boosaaso oo albaabada loo laabay & Agaasimaheedii oo la xiray – SBC
Idaacad ku taal Boosaaso oo albaabada loo laabay & Agaasimaheedii oo la xiray
Mid ka mid ah Idaacadaha ka hawlgala magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari ayaa hawada ka maqan iyadoo la sheegay in albaabada la isugu dhuftey, taasi oo ku timid ciidamada Puntland oo amray in Idaacada hawada laga bixiyo, xili ay xaley kuguda jirtey hawlaheedii warbaahineed.
Idaacada albaabada la isugu dhuftey ayaa lagu magacaabaa Codka Nabadda waxaana aamusnaanteeda ay ku sheegeen qaar ka mid ah shaqaalaha Idaacada oo codsadey inaan magacooda la xusin in xaley 10:30-kii fiidnimo ciidamo ka tirsan Puntland ay yimaadeen xarunta Idaacada isla markaana ay amreen in hawada laga saaro Idaacada taasi oo ay u hogaansameen hawlwadeenadii xiligaasi ku sugnaa xarunta.
Shaqaalaha Idaacada ayaa sheegay in sidoo kale isla xaley habeenimadii gurigiisa laga kaxeystey Agaasimihii Idaacada Codka Nabadda Cawke Cabdullaahi Cali, isagoo xaley ku baryey saldhiga Booliiska magaalada Bosaaso.
Lama oga ujeedada dhabta ah ee ka dambeysa xariga Agaasimaha iyo Idaacada la amray in la xiro, waxaase jira tuhun ku aadan in Idaacada laga haysto baahinta hadal saxaafadeed uu baahiyey Afhayeenka xoogaga Shabaabka ee hawlgalada Military Sheekhh Cabdicasiis ( Abuu Muscab ) oo isagu ka warbixiyey iska horimaadyo ku dhexmarey duleedka Boosaaso Ciidamada Puntland iyo maleeshiyaadka deegaanka Gal-Gala ku sugan ee taabacsan Wadaadka Sheekh Maxamed Siciid (Atam).
Xiriiro aan isku daynay inaan ku helo masuuliyiinta gobolka iyo ciidamada Puntland oo ku aadan sababaha Idaacada loo xiray ayay inoo suurtagali wayday inaan ku helo masuuliyiintaasi.